Shiinaha sariirta sariirta sare sariirta adag alwaaxda sariirta lagu keydiyo sariirta # 0111 Soo-saar iyo Warshad | Yamazonhome
Sariiraha sariirta sare alwaax adag sariir laba jibaar sariir # 0111
Magaca: sariirta sariirta
Lambarka Model: Amac-0111
Cabir: 1500 / 1800mm * 2000 * 800mm
Meel ku habboon: qolka jiifka, Hoteelka, Barashada
Sariirta adag ee sariirta
Qalab fudud oo fudud, midab alwaax raaxo leh iyo qaab, ma laha naqshad casri ah oo aad u adag, qaab yaab leh iyo qaab buunbuunin ah, ha u oggolaan dadku inay iloobaan hal-ku-dhigga xayeysiinta iyo degganaanta, u abuuraan guri diirran, oo ay xoogga saaraan ku raaxeysiga waqtiga caafimaadka, dabiiciga iyo raaxada Waqooyiga Yurub.
Nidaamka shirkii tooska ah ee guddiga oo dhan
Isu imaatinka tooska ah ee guddiga weyn waxaa loola jeedaa in ay jirto oo keliya kala-jajabinta jiifka ah iyo kala-goyn la'aanta jihada dhererka, taas oo ka dhigaysa kala-soocidda alaabta guriga mid quruxsan, qalab adag, miisaan culus, iyo awood qaadasho wanaagsan.
Waqooyiga Ameerika Tayada Sare ee White Oak
Geedka fasalka-FAS wuxuu waafaqsan yahay sharciyada qiimeynta ee NHLA ee Mareykanka. Fasalka 'FAS-grade' waxaa loola jeedaa awooda lagu bixinayo dusha sare ee nadiifka ah, qaababka quruxda badan, iyo nabarrada yar. Darajadan alwaaxda ah ayaa ugu habboon samaynta alaabta guriga. Alaabta guriga la dhigayna waa mid adag oo waara, ma aha mid si fudud u jajaban, xirta u adkaysta iyo daxalka u adkaysta, ma fududa in wax la kariyo.
Qalab sambabeed oo tayo sare leh + godka badbaadada
Usha cadaadiska hawadu waxay si fudud u taageertaa guddiga toosinta, joodariga, iyo laabashada iyo soo dejinta dharka ayaan dadaal lahayn, furitaanka iyo xidhitaankuna waa xasilloon yihiin oo ku habboon yihiin. Madaxa sariirta waxaa loo qaabeyn karaa balac dhan 85mm, kaas oo loo adeegsan karo in la dhigo walxaha yar yar sida taleefannada gacanta. Waa fikir iyo raaxo leh. Waxa ku yaal laba godad nabadgelyo oo laba-god ah oo badbaadada ah oo saaran madaxa, kaas oo loo isticmaali karo laydhadhka habeenkii ama lagu dalaco, taas oo aad ugu habboon una wanaagsan dadka caajiska ah.
Xereen wanaagsan oo rinjiga dabiiciga ah
Heerarka rinjiga ayaa si gaar ah u adag. Habka buufinta buuxda ee furan waxyeello uma leh jidhka bini'aadamka, deegaan ahaanna waa ka caafimaad iyo caafimaad badan yahay. Shayga cusub ee cusub asal ahaan malahan wax dhadhan ah, kaliya waxaa la soo daayaa udgoonka qoryaha laftiisa. , Caafimaadka dabiiciga ah, wasakheyn la'aan.
Sariir adag oo alwaax leh oo keyd leh
Ka dib afar jeer oo buufin ah oo isku xigta, dusha sare ee rinjiga ayaa ka sii adag, wuxuuna soo bandhigayaa dhalaal dabiici ah oo qurux badan, oo u oggolaanaya muuqaalka, midabka iyo muuqaalka qoryaha adag in si dabiici ah loo soo bandhigo. Qalabka guryaha wanaagsan, faahfaahintu waa aasaaska, faahfaahin walbana waa soo bandhigida tayada.
Naqshadeynta naqshadeynta geeska
Naqshadeynta madaxa sariirta ayaa ku habboon qalooca dhabarka si ka wanaagsan sida loo isticmaalo, wuxuu yareeyaa cadaadiska ku soo ururay dhabarka inta lagu jiro shaqada, wuxuuna ka dhigayaa ku tiirsanaanta mid aad u raaxo badan. Madaxa sariirta wuxuu leeyahay geesaha wareegsan qaabdhismeedka saaxiibtinimada leh, dhammaan koonayaasha waa la isku qurxiyay oo la safeeyey, badeecaduna waa ammaan Hagaaji, ha kuu seexato adiga oo dareemaya nabadgelyo.
Meel weyn oo lagu keydiyo + isku xirnaanta qalab tayo sare leh
Meel weyn oo wax lagu keydiyo ayaa la barbar dhigi karaa dharka labiska ee qolka jiifka. Marka loo barbardhigo sariiraha caadiga ah, sariirta santuuqa waxay leedahay faa iidada karti ballaaran. Waxaad ku ridi kartaa dhowr xijaab iyo dharka jiilaalka sidaad doonto, booskuna waa mid waxtar leh oo badbaadinaya booska guriga. Xirfado, isku xirnaanta qalab tayo sare leh, xasiloon oo lagu kalsoonaan karo iyada oo aan la gariirin ama gariirin, iyo qaab macquul ah oo xoog leh.
Looxyada sariirta ee alwaaxa adag si adag ayaa loo habeeyay
Gogosha sariirta waxay ka samaysan tahay qoryo geed tayo sare leh leh, geedaha geedka si toosa ayaa loo gooyaa oo loo kala bixiyaa iyada oo aan la marin farshaxan iyo rinjiyeyn labaad. Waa deegaan ku habboon oo caafimaad leh, midabka alwaaxa iyo udgoonkiisana waxaa ka buuxa soo jiidasho dabiici ah. Loox kasta oo sariir ah si isdaba-joog ah oo hagaagsan ayaa loo qaabeyaa, taas oo ka dhigaysa awoodda qaadista inay sii xoogaysato, waana sahlan tahay in lagu boodo oo lagu ciyaaro.
Hore: Jimicsiga Hawada Mat Mat 2m 3m 4m xirfadle Hawada lagu buufin karo Yoga Sport dagaalka suufka ayaa ka hortagaya dhaawacyada gogosha gogosha 0388
Xiga: DWF jumlada la buufin karo yoga derin caado isboorti jimicsi hawo jimicsi Tumbling Mat Air Floor 0393
Jadwalka Iskudhinta Isku Beddelka iyo Miiska Daraasada F F F ...
Nordic Casri Nol Nolol Nadiif Ah Oo Laba-Midab ...
Multifunctional Digaagga Taranka House S fudud ...
Sariir Sariir Sariir Sariir Loogu Talagalay Sariir Qoyan Sariir ...
Qalab Casri ah oo Casri ah oo Sunta Loogu Sameeyo # 0028